» सामुदायिक विद्यालयका ७ सय विद्यार्थीले गरे नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
सामुदायिक विद्यालयका ७ सय विद्यार्थीले गरे नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
१४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०९:५७
सर्लाहीको हरिवन- ८, बेत्तालीमा रहेको श्री जनजागृति माविका छात्रा छात्रहरुलाई सोमवार नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच गराइएको छ। हरिवन नगरपालिकाको सहयोग र हरिवनमै रहेको स्वाभिमान अस्पतालको आयोजनामा एक कार्यक्रम गरि विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य जाँच गराईएको हो। विद्यालयमा अध्ययनरत लगभग ७ सय विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकालाई एकैसाथ स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएका अस्पतालका डा. सन्जय श्रेष्ठ र डा. निरञ्जन महतोले स्वास्थ्य परीक्षण गराइएका थिए।
यसैबीच विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकालाई विद्यार्थी कार्ड र शिक्षक कार्ड वितरण गरिएको छ। कार्ड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकाले एक वर्ष भित्र विद्यालय अथवा घरमै पनि कुनै बिरामी भएको खण्डमा आकस्मिक सेवा नि:शुल्क र उपचार खर्चमा छुट दिने आयोजकले बताए। हरिवन नगरलाई समृद्ध नगर निर्माणका लागि तथा जनताप्रतिको समर्पण भावले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य जाँच गराइएको आयोजक संस्थाका गौरी महतोले जानकारी दिए ।
यस्तै आज वडा नम्बर २ मा रहेको रामअवतार जनता मावि अत्रौलीमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण को कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । हरिवन नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तथा ८ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष यज्ञ विनोद ढुंगेलको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा निर्वाचित वडा सदस्यहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र गौतम व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु शिक्षक, शिक्षिका, अविभावक विद्यार्थीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।